Maxaa lagu booqanayaa magaalada Talyaaniga ee Cagliari | Wararka Safarka
Waxa lagu booqdo Cagliari
Cagliari waa caasimada jasiiradda Sardinia, waa magaalo aan ku arki karno nuxurka cajiibka ah ee Mediterranean. Magaalo horeyba uga timid xilliyadii hore oo aragtay Carthaginians, Roomaan, Byzantines ama Carab oo maraya taas oo aan ka heli karno astaamo badan oo soo maray. Taasi waa sababta ay u noqotay magaalo taariikhdu qayb ka tahay dhagax kasta iyo gees walba.
In magaalo waan garan karnaa xaafado taariikhi ah oo kala duwan oo waxaad ku raaxeysataa hadhaagii hore ee Roomaanka ama cunnadiisa macaan. Waa magaalo xeebeed, tan ugu weyn jasiiradda Sardinia, waana ku dhex lumi karnaa si aan ugu raaxaysanno khibrad gaar ah.
1 Bastion ee Saint Remy
2 Amphitheater-ka romanka
3 Qasriga San Michele
4 Munaaraddii maroodiga
5 Matxafka qadiimiga ah ee Cagliari
6 Dekedda iyo xaafadda Marina
7 San Pancracio Tower
8 Fagaaraha Viceregio iyo Qasriga
Bastion ee Saint Remy
El Bastion of Saint Remy waa mid ka mid ah dhufaysyada ugu caansan ee la yaqaan magaalada. Waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad waxaana iska leh xaafadda caanka ah ee Castello. Waad ka bixi kartaa Passegiatta Coperta ama wiishka Piazza della Constituzione. Markaad gaarto aasaaskan waxaan ku yeelan karnaa aragti weyn magaalada, meelaha sida dekedda ama xaafadda Marina. Meeshan waxaa sidoo kale ku yaal barxado si loo helo wax qabow inta aan ku raaxeysaneyno aragtida.
El Amphitheater-ka Roman waa mid kale oo ka mid ah meelaha ay tahay inaan ku aragno Cagliari. Waa mid ka mid ah astaamihii weli ku hadhay magaalada marinka Roomaanka. Maanta waxaan arki karnaa aagga laga xardhay dhagaxa oo leh jaranjarooyin. Dhacdooyinka qaar wali meeshan ayey ka dhacaan, markaa haddii aan nasiib yeelanno waxaa laga yaabaa inaan mid la mid noqonno. Tiyaatarka amphitheater wuxuu ka bilawday qarnigii labaad ee AD wuxuuna lahaa awood kumanaan qof ah, isagoo ahaa udub dhexaadka nolosha bulshada xilliyadii Romanka ee magaalada.
Qasriga San Michele
Qasrigan oo qaab dhufeys ah ayaa ku yaal aagga ugu sarreeya magaalada, sidaa darteed waxay na siin doontaa aragtiyo wanaagsan. Waxay ku saabsan tahay a Qalcaddii qarnigii XNUMXaad kaas oo loo dhisay inuu ilaaliyo oo hoy u noqdo sharafka jasiiradda. Waxaa loo abuuray dhufeys ay ugu wacan tahay duulaanka iyo burcad badeedda, si looga ilaaliyo iyaga. Kaliya munaaradaha iyo qeyb ka mid ah derbiyada ayaa ka haray qalcaddii hore, in kastoo aan u aragno inay dhameystiran tahay, haddana waa la soo celiyay iyadoo la isku dayayo in la ilaaliyo isla qaabkii. Qasriga dhexdiisa hadda waxaa ku yaal xarun farshaxan iyo dhaqan.
Tani waa a munaaraddii dhexe kaas oo aad loo ilaaliyo oo kuyaala xaafada caanka ah ee Castello. Munaaraddani waxay soo bilaabmaysaa qarnigii XNUMX-aad waxayna leedahay albaab yar oo duug ah oo ku yaal qaybta hoose ee na geynaysa waddada weyn ee magaalada qadiimiga ah, taasoo ka dhigaysa mid ay tahay in la arko. Markaan maraynno munaaradda waxaan raadsan karnaa farshaxanimada maroodiga oo magaceeda u bixinaya.
Matxafka qadiimiga ah ee Cagliari
Tani waa Matxafka qadiimiga ah ee ugu muhiimsan jasiiradda wuxuuna leeyahay uruurin ballaaran. Si micno la’aan ah ilbaxnimooyin kaladuwan ugama bannaaneyn jasiiradda hareeraheeda. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto qaybo ka taga taariikhda hore ilaa waqtiyo kale sida Byzantine. Haddii aad jeceshahay taariikhda iyo faahfaahinta qadiimiga ah, shaki la’aan waa meel ay tahay inaad tagto.
Dekedda iyo xaafadda Marina
Haddii aad rabto meel nolol ka buuxo, waa inaad soo martaa dekedda iyo xaafadda Marina, oo ah meel aan ka helno dukaanno iyo maqaaxiyo. Xaafadu waxay ku taal wadadii hore ee Roomaanka waxayna ku dhowdahay dekedda Cagliari. Waa meel aan sidoo kale ka arki karno piazza Yenne iyo xarunta dowladda hoose. Ku Wadada Via G Manno waa mida leh dukaamada ugu badan, Meel runtii madadaalo u ah kuwa doonaya inay ku raaxeystaan ​​wax ka adeegashada.
San Pancracio Tower
Tani munaaraddii waxaa la abuuray qarnigii afar iyo tobnaad waana mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan magaalada. Waa mid ka mid ah dhibcaha ugu sarreeya mitirka 130 oo halkaas waxaad ka heli kartaa aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan Cagliari xagga sare. Waxay ahayd munaarad difaac oo ka dhan ah Carabta iyo Genoese oo leh muhiimad taariikhi ah oo weyn. Intaas waxaa sii dheer, sannado ka dib waxaa loo isticmaalay xabsi ahaan, in kasta oo uu u xirmay tirada baxsashada badan. Si aad u gasho oo aad kor ugu kacdo si aad u aragto magaalada, waa inaad bixisaa tigidh aad u jaban, markaa waa booqasho u qalanta.
Fagaaraha Viceregio iyo Qasriga
Tani waa mid ka mid ah fagaarayaasha ugu muhiimsan magaalada, oo la abuuray qarnigii afar iyo tobnaad. Fagaaraha waxaa lagu qurxiyay qarniyo ka dib ujeeddooyinka hal-ku-dhigga ah ee Sardinia, taas oo ka dhigaysa mid ay ugu jecel yihiin dalxiisayaasha. Dhexdeeda waxaan sidoo kale ka arki karnaa Viceregio Palace, mid kale oo ka mid ah qodobbada xiisaha leh ee magaalada Cagliari.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Waxa lagu booqdo Cagliari
Tilmaamaha aasaasiga ah ee safarka xilliyada cudurka coronavirus